Fiidiyowga, oo aan galinnay bogagga BBC Somali fiidkii Arbacada – habeenkii ka horeeyay doorashada dalka Uganda, wuxuu sharaxaad ka bixinayay sadexda musharax ee ugu horeeya doorashada dalka Uganda, astaamaha ololahooda, iyo doorka dhalinyarada iyo adeegsiga warbaahinta bulshada ee doorashooyinka. Si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyay oo way anfacday dhagaystayaasha – waxay ahayd warbixin wanaagsan, oo xog gudbinaysa.
BBC, marnaba uma bareerto in ay si ula kac ah ugu xadgudubto dhagaystayaasheeda. Waxaa ka mamnuucaya mabaadii’da dhinaca tifaftirka iyo mas’uuliyadda ka saaran dhagaystayaasheeda. Ma nihin kuwo dhagaysta fikir gaar ah, ama soo gudbiya doodda hal dhinac oo kaliya – waa arrin xadgudub ku ah mabaadii’deenna dhinaca Tifaftirka.